Ostermarsch 2018 Braunschweig အတွက် … | portal │ပညာရှင် Hans Kottke
« ရုပ်ရှင်: Braunschweig 1913 …
အဆိုပါ Braunschweig နှင့်သူမ၏ “Schloss”… »
Ostermarsch 2018 Braunschweig အတွက် …
တစ်ဦးကသစ် World War ခြိမ်းခြောက်?
အဲဒီအစားဆီးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မြှင့်တင်ရန်၏ Afrin န်းကျင်ကဒျဒေသများဆန့်ကျင်သည်၎င်း၏တိုက်ခိုက်မှုနှင့်အတူတူရကီအဖြစ်တိုင်းပြည်ဆန့်ကျင်နိုင်ငံတကာဥပဒေတိုက်ခိုက်မှုများကိုအမေရိကန်အမျိုးနှင့်ဣသရေလအမျိုးယူ. မြောက်ကိုရီးယား၏နျူကလီးယားလက်နက်များအကြောင်းကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ဆွေးနွေးပွဲနေသော်လည်းအမေရိကန်နှင့်မြောက်ကိုရီးယားအကြားဤရှုပ်ထွေးပဋိပက္ခနေဆဲအလွန်အမင်းအန္တရာယ်. ဖက်ဒရယ်အစိုးရသည်ဘောလ်တစ်များတွင်စစ်တပ်များကိုသာရှိပါတယ်: ရုရှားနယ်စပ်တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ထပ်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ပိုမိုမြန်ဆန်ရပြန်လည်နေရာယူတပ်စွဲ၏တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ရည်ရွယ်ပါသည်ဖြစ်နိုင်. ကျနော်တို့ပဋိပက္ခများကိုတစ်ငြိမ်းချမ်းသော resolution ကိုများအတွက်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများမူဝါဒနှင့်စစ်ပွဲအပြောအဆိုများနှင့်ခေါ်ဆိုခကိုအပြစ် တင်..
WHO ကလက်နက်တင်ပို့ရောင်းချမှုစစ်နှင့် ESCAP အားပေးအားမြှောက်! ဂျာမဏီကိုထပ်ယင်း၏လက်နက်တင်ပို့မှုတိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်. သူတို့ကဦးသည် သွား.. တစ်ဦး. ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားမှ, နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ, အဆိုပါအရေးပါဆီးရီးယားနှင့်ယီမင်မှာရှိတဲ့စစ်ပိုဆိုး. Afrin အပေါ်တူရကီတိုက်ခိုက်မှုဂျာမန် Leopard တင့်ကားများနှင့်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကောက်ယူရမည်.
အဆိုပါ Bundeswehr တိုက်ခိုက်ရေးမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ၏ဝယ်ယူတောင်းဆို. အမေရိကန်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ဂျာမဏီကနေထိန်းချုပ်ထားကြသည်, အဆိုပါဆိုးဝါးလပိုင်းတွင်တစ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်. ဤလျှောက်လွှာကိုစစ်ပွဲများအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိလူများ၏သတ်ဖြတ်မှုပစ်မှတ်ထားနေသည်, တာဝန်ခံမပါဘဲ, လုပျထုံးလုပျနညျးမြားနှငျ့တရားစီရငျခကျြ.
ကျနော်တို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရအပေါ်ကိုပဌနာ, Büchelထံမှနျူကလီးယားလက်နက်များနောက်ဆုံးတော့ဆုတ်ခွာ (Rheinland-Pfalz) ပြဋ္ဌာန်းရန်ရန်နှင့်ထို့ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနျူကလီးယားထိပ်ဖူး၏သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမပေး. ဖက်ဒရယ်အစိုးရနောက်ဆုံးတော့ကုလသမဂ္ဂနျူကလီးယားပိတ်ပင်မှု join သင့်တယ်!
အသစ် GroKo upgrade နှင့်နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဘာသာရပ်များ၏အာဏာရှင်ချင်, ၏လက်နက်အသုံးစရိတ် 2% ဂျီဒီပီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ. ငါတို့သည်ဤပယ်ချ. ငွေကိုပညာရေးနှင့်လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လူမှုရေးအိုးအိမ်များအတွက်အသုံးပြုသည်, သောပြည်တွင်းရေးနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကိုအားပေးအားမြှောက်.
Peace Support နှင့်လူမှုရေးသတ္တုတွင်း EXIT!
ကျနော်တို့အီးယူစစ်တပ်ကမလိုအပ်ပါဘူး, သို့သော်အရပ်ဘက်နှင့်လူမှုရေးဥရောပ, အဆိုပါလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး, အရပ်ဘက်ပဋိပက္ခ, စီးပွားရေးစည်းလုံးညီညွတ်မှု, နာမည်ကျော်နှင့်ဒုက္ခသည်များ၏ဧည့်ခံခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်!
Tags:: 2018, Braunschweig, Ostermarsch
This entry was posted on Saturday, မတ်လ 31, 2018 တွင် 17:07 ပညာရှင် Hans Kottke ကအောက်မှာတင်သွင်းသည် 2018, ယခု, ယေဘုယျ, Braunschweig, ဗီဒီယို. သင်ကတဆင့်ဒီ entry ဆိုတုံ့ပြန်မှုလိုကျလြှောကျနိုငျ RSS ကို 2.0 အစာ. သင်လုပ်နိုင်သည် တစ်ဦးတုန့်ပြန်ထွက်သွား, သို့မဟုတ် trackback သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် site တစ်ခုကနေ.
Tue Jun 25th 4:17:53 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန် 2019